Ramos oo ka hadlay xiddiga u qalma ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or 2019… (Messi, Ronaldo Mise Van Dijk?) - Hargeele - Wararka Somali State
Ramos oo ka hadlay xiddiga u qalma ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or 2019… (Messi, Ronaldo Mise Van Dijk?)
(Madrid) 11 Sebt 2019. Kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa ka hadlay xiddiga u qalma inuu ku guuleysto abaal-marinta Ballon d’Or 2019.
Sergio Ramos ayaa sheegay in dhigiisa reer Holland ee Virgil van Dijk uu u qalmo ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or 2019.
Xiddigaha Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo Virgil van Dijk ayaa waxay sanadkan si adag ugu dagaalami doonaan ku guuleysiga abaal-marintan.
Virgil van Dijk ayaa wuxuu qabtay shaqo fiican xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, isagoo kooxdiis Liverpool ka caawiyay inay ku guuleysato koobka Champions League markoodii 6-aad ee taariikhda.
Daafaca reer Holland ayaa dhawaan ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee Yurub, wuxuuna ku garaacay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo goob-joog ahaa kuwaasoo abaal-marinta kula tartamayey Virgil Van Dijk.
Qof walba ayaa wuxuu sugayaa inuu ogaado cidda loo caleemo saari doono abaal-marinta Ballon d’Or 2019, taasoo ay bixiso sanad kasta majaladda France Football, oo ay u codeeyaan suxufiyiinta, kabtanada iyo tababarayaasha ka kala socda daafaha dunida.
Haddaba kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa u sheegay wargeyska “Marca” ee dalka Spain:
“Virgil van Dijk wuxuu u qalmaa ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or 2019, runtii haddii uu helayo, waxay u muuqataa inay u furantahay isaga”.
Si kastaba ha noqotee, Fabio Cannavaro ayaa ahaa daafacii ugu dambeeyay ee ku guuleysta abaal-marintan, waxayna aheyd sanadkii 2006-dii, kaddib markii uu xulkiisa qaranka Italy ku hogaamiyay ku guuleysiga koobka adduunka.
Ethiopia’s vintage taxis near the end of the road – The Guardian
Ole Gunnar Solskjær oo hal arrin ka codsaday garsoorayaasha kahor kulanka caawa ee Manchester derby